အတွေးအမြင်/သုံးသပ်ချက် Archives | Page 44 of 48 | Frontier Myanmar
အသွင်ကူးပြောင်းရေး အဆင်ပြေ ချောမွေ့နိုင်မလား
သမ္မတကြီးအနေနဲ့ကတော့၊ တကယ်လို့များ အရေးပေါ်အခြေအနေ တစ်ခုနဲ့ ဆုံလို့ရှိရင် သူကိုယ်တိုင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် ဒါ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့က ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ အင်န်အယ်လ်ဒီ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး.
ငွေကြေးတန်ဖိုး တည်ငြိမ်အောင် ဗဟိုဘဏ် မထိန်းနိုင်ဘူးလား
စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို သတိကြီးကြီးထားပြီး ဆောင်ရွက်နေကြချိန် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍမှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ပြဿ နာကြီးတစ်ခုကတော့ မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုး မတည်မငြိမ် ဖြစ်မှုပါ။ ဒီတစ်ကြိမ် ငွေကြေးတန်ဖိုး မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှု အတိုင်းအတာကို တွက်ချက်ကြည့်ရင် တစ်ပတ်ကနေ ၁၀ ရက်တာ.
ခေါင်းထောင်ထလာတဲ့ တိုင်းရင်းသား အရေး စိန်ခေါ်မှု၊ အင်န်အယ်လ်ဒီ ကျော်ဖြတ်နိုင်မလား
အားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အင်န်အယ်လ်ဒီ ကနေ အသွင်ကူးပြောင်းရေး အစိုးရဖွဲ့စည်းတော့မယ့် ဒီလိုကာလမှာ ခုလို အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ တန်းစီ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ အခုရက်ပိုင်း ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အမျိုးသားရေး တောင်းဆိုချက်တွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေ စတာတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ သတင်း.
တပ်မတော် တစ်ခုတည်းအောက်မှာ စုစည်းနိုင်ကြမလား
စည်သူအောင်မြင့် ရေးသားသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်အတွင်း ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေထဲမှာ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးဟာ ပြင်ဦးလွင်မြို့ စစ်တက္ကသိုလ်DSA (Defense Services Academy) ကို သွားရောက် လည်ပတ်ကြည့်ရှုတယ် ဆိုတဲ့သတင်းဟာ အလွန်ထူးခြားပါတယ်။ ၁၉၄၈ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီး.